Ciidanka xoogga oo burburiyay saldhigyo Al-shabaab ay la haayeen | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ciidanka xoogga oo burburiyay saldhigyo Al-shabaab ay la haayeen
Ciidanka xoogga oo burburiyay saldhigyo Al-shabaab ay la haayeen
Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya ee ka howlgala deegaano hoos yimada degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelaha hoose ayaa burburiyay saldhigyo Al-shabaab ay ku lahayeen qeybo kamid ah gobolkaas.
Taliyaha ururka 26 guutada sadaxaad ee ciidamada xoogga dalka gaashaanle sare Xasan Maxamed Abuukar (Xasan Jaamici) oo howlgalkaasi hogaaminayay ayaa SNARADIO u xaqiijiyay In ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay burburiyeen saldhigyo Al-shabaab ku lahayeen deegaanada Mushaani iyo Janaale ee gobolka Shabellaha Hoose.
Colonel Xasan Jaamici, ayaa Sidoo kale, xusay inta uu socday howlgalka lagu burburinayay fariisimaha Cadowga Al-shabaab ay kala Kulmeen weerar fashilmay waxa uuna sheegay taliyaha in dagaalka lagu dilay tiro ka tirsan nabad diidka Al-shabaab.
“Intii ciidamada geesiyaasha ay ku jireen howlgalka waxaan halkaasi kula kulnay dagaal naf la caari ah oo Nabad diidka ay ku soo qaadeen ciidamada waxaana halkaasi Al-shabaab looga dilay tiro ka tirsan maleeshiyaadkaas,” ayuu yiri Jaamici.
Previous articleTrump oo soo saareya sharci cusub oo soo galootiga quseeya
Next articleXildhibaan Dalxa oo bogaadiyay dib u shaqeeynta Garonka Diyaaradaha Muqdisho